Location: musha » Kutumira » LGBTQ » Qatar mahotera haadi 2022 World Cup ngochani vashanyi
Mapoka ekodzero dzeLGBT + akadzokorora kutaura kushushikana kwakanyanya pamusoro pemabatirwo angaitwa varume nevakadzi muQatar kubva nyika yakapihwa kodzero dzekutambira World Cup muna 2010.
Kunetsekana kwekodzero dzengochani kwakauya sechikamu chekutsoropodza danho reFIFA rekudoma nyika iyo yakatarisana nemhosva yekutyora kodzero dzevashandi vanoenda kune dzimwe nyika ivo vachivaka nhandare inodiwa uye zvivakwa.
Boka revatapi venhau vekuEurope vanoongorora vachangobva kuburitsa zvakabuda mukuferefeta kwakazvimirira kwechangobva kuitika uko vakawana kuti pachine ruvengo rwakanyanya uye ruvengo rwakanyanya maererano nevarume vaviri vakaroorana kana zvasvika pakubhuka pekugara mumahotera. Kwata pamberi pe2022 World Cup.
Mukuferefeta kwavo, vatori venhau venhepfenyuro dzehurumende muDenmark, Sweden neNorway vakaita sengochani dzichangochata dzichironga zororo ravo rehusiku apo vachiedza kubhuka kamuri mumahotera makumi matanhatu nepfumbamwe pane rondedzero yeFIFA yevanopa vanokurudzirwa.
Pasinei FIFA ichitaura kuti munhu wese kubva kumativi ese ehupenyu achagamuchirwa muQatar kana World Cup inotanga muna Mbudzi, mahotera matatu eQatari ari parunyorwa rweFIFA akaramba zvachose kubhurwa kubva kune varume nevakadzi vachipa mitemo yeQatar iyo inoita kuti ungochani huve zvisiri pamutemo, nepo vamwe makumi maviri vakadaidzira kuti ngochani dzirege kuratidza rudo pachena.
Mahotera akasara parunyorwa rweFIFA sezviri pachena akange asina nyaya dzekubvuma kuchengetwa kubva kune varume nevakadzi vakaroorana, maererano nemushumo wakabatanidzwa neNorway NRK, Sweden's SVT neDenmark's DR.
Qatar's Supreme Committee for Delivery & Legacy (SC), dare rakapihwa basa rekuronga Mukombe weNyika, rinoziva zvakabuda mushumo uye rakati kunyangwe Qatar iri 'nyika inochengetedza', "vakazvipira kuendesa inosanganisirwa yeFIFA World". Chiitiko chemukombe chinogamuchirwa, chakachengeteka uye chinowanikwa kune vese.'
Vachitaura pamusoro pekuferefeta uku, FIFA yakazivisawo kuti inoramba ichivimba kuti 'matanho anodiwa' achange avapo panozotanga World Cup muna Mbudzi.
"FIFA ine chivimbo chekuti matanho ese anodiwa achave aripo kune vatsigiri veLGBTQ + kuitira kuti ivo, sevamwe vese, vanzwe kugamuchirwa uye vakachengeteka panguva yemakwikwi," vakati.
Komiti FIFA Noweyi Kwata Siwidheni
IGLTA post-denda LGBTQ+ Travel Survey inogamuchira CETT Alimara Mubairo
Felix Brambilla anoti:
Chivabvu 13, 2022 pa11: 05
Ini ndiri muFrench / America, ndapedza kakawanda kugara muQatar. Ini parizvino ndiri Doha kwemazuva mashoma. Vamwe vechikwata chedu ingochani uye havana kana ruvengo chero nguva. Manheru ano, takadya kuNobu uko matafura maviri engochani dzanga dzichirira nekuseka. Kwete kucheuka kubva kune chero ani zvake. Nezve PDA, nyika inochengetedza uye haikurudzire kuita pachena, zvisinei nevarume vanobatanidzwa.
Ndakauya kuQatar ndizere nepfungwa dzakaipa dzakapihwa asi kubva ipapo ndakagashira tsika nehunhu hwenharaunda ino, kutanga nebasa revakadzi.
Ichi chinyorwa chinoreva 3 kubva ku69 mahotera ane akachengeterwa pamusoro wenyaya kana audzwa pachena nezvekuda bonde. Ini chaizvo handisi kuona hombe pane izvi. Ngatitarisei pane zvakanaka zviri shure kwechiitiko chekutanga chehukuru uhu muNyika yeArab. Ngatisiyanei nemacliche tigamuchire mukana wekuchinjana uye tive nemafungiro edu.